El တယ်လီဖုန်းစျေးကွက်သည်အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးစျေးကွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာကိုရယူခြင်းသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်။ ဟုတ်ကဲ့ OK Samsung သည်ထိုအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားပုံရသည် အတော်လေးအားသာချက်နှင့်အတူယခုအချိန်တွင်။ ကျနော်တို့မြင်နေကြပေမယ့် စားသုံးသူဖုန်းများဝယ်ယူပုံတွင်သိသာသောပြောင်းလဲမှုများ။ စျေးကွက်သို့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်များရောက်ရှိခြင်းအပြင်။
ဒီအပြောင်းအလဲများရှိသည် ဈေးကွက်ထဲမှာတော်လှန်ရေးလို့ယူဆတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီသည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်၎င်း၏အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းရန်သွားနှင့်လက်သည်းများကိုအတင်းအကျပ်တိုက်ခိုက်သည်။ ဘာကိုကြည့်ဖို့စိတ် ၀ င်စားသလဲ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မော်ဒယ်များစျေးကွက်လွှမ်းမိုးသူများဖြစ်ကြသည်။ ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့မှာဒီဒေတာရှိပြီးသား။ သူတို့ကိုသင်သိချင်ပါသလား။
ငါတို့တတ်နိုင်ပြီ ယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်အတွင်းတိကျသောရောင်းအားဒေတာကိုသိရှိထားပါ။ ဖုန်းတံဆိပ်နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မော်ဒယ်များနှစ် ဦး စလုံး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စားသုံးသူများ၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကသတိပေးပေမယ့်။ လာမည့်လများအတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင်အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားရှိသည်။ ဒါဖြစ်နိုင်တယ် ဒီဒေတာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွား.
ရောင်းအားအကောင်းဆုံးကဘာတွေလဲ။ သူတို့ကိုသင်အထက်ပါပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ငါတို့မြင်နိုင်သည်အတိုင်း iPhone7သည်ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ Apple ၏အဆင့်မြင့် Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy Note 8 တို့ကဲ့သို့သောဖုန်းများမရောက်ရှိခြင်းကိုခုခံသည်။ ဒုတိယနေရာမှာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဖြစ်ပြီး၊ iPhone ကို 6S။ Samsung ကသူ့ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားအဆင့်နဲ့တတိယနေရာမှာရှိပါတယ် Galaxy J2 Prime။ ဒီထိပ်တန်း ၅ ကို OPPO ကအာရှမှာရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုပိတ်ထားတုန်း။
အရောင်းရဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေအားလုံးကိုအောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ကိန်းဂဏန်းများအရကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရက်သတ္တပတ်များကိုသိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Samsung ကတော့အငြင်းပွားဖွယ်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဆဲပင် စျေးကွက်က။ စဉ်တွင် Apple ကဒုတိယနေရာမှာရှိနေသူ Huawei ဘယ်လိုနီးကပ်လာသလဲဆိုတာသူသိပေမယ့် ဒါပေမယ့်သံသယမရှိဘဲ, မီးမောင်းထိုးပြရမည်ဖြစ်သည်သောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ် Xiaomi က။ တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့သည် ၈၇% တိုးတက်မှု.
ဒါဟာဆက်ဆက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လာမည့်လများအတွင်းစျေးကွက်မည်သို့ပြောင်းလဲလာသည်ကိုကြည့်ပါ. လာမယ့်လအနည်းငယ်မှာဘာဖြစ်မယ်လို့သင်ထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရောင်းရဆုံးဖုန်းများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်
Light in the Box တွင် ၁၁.၁၁ ကမ်းလှမ်းမှု၏အားသာချက်ကိုယူပါ
Samsung က ၂၀၁၈ အတွက် Galaxy J3 အသစ်ကိုငါတို့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်